China Conical abụọ-ịghasa extruder rụpụta na Factory | Jiarui
Conical ejima-ịghasa extruder bụ ụdị nke elu arụmọrụ mix extruding igwe. Njirimara ndị dị otú ahụ bụ: ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ihe na-esiri ike ire ere, jikọta nke ọma, àgwà kwụsiri ike, ikike dị elu, ngwa ngwa na ndụ ọrụ ogologo, wdg. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ịghasa kwesịrị ekwesị na inyeaka, ọ nwere ike wepụ plastik thermoplastic ozugbo. , karịsịa isiike ịkwanyere ntụ ntụ n'ime ọkpọkọ, mbadamba, mpempe akwụkwọ, ihe nkiri ma ọ bụ profaịlụ, wdg A pụkwara iji ya maka mgbanwe plastic na ntụ ntụ.
Conical ejima-ịghasa extruder bụ ụdị nke elu arụmọrụ mix extruding igwe. Njirimara nke onye ntanye dị ka ndị a: obere ịkwa mkpụmkpụ ọsọ, ihe na-esiri ike ire ere, jikọta nke ọma, àgwà kwụsiri ike, ikike dị elu, ngwa ngwa na ndụ ogologo oge, wdg. , karịsịa isiike ịkwanyere ntụ ntụ n'ime ọkpọkọ, mbadamba, mpempe akwụkwọ, ihe nkiri ma ọ bụ profaịlụ, wdg A pụkwara iji ya maka mgbanwe plastic na ntụ ntụ.
A na-edozi extruder ahụ na nchedo kpatara, mkpuchi mkpuchi, na-agbagharị usoro ikuku mmanụ na-agbanwe agbanwe, usoro mmanụ jụrụ mmanụ, ikpochapu ọkpọkọ na nri nri.
E nwere ọtụtụ ụdị nke usoro nchịkwa eletrik maka nhọrọ (dịka ọmụmaatụ: PLC auto control system). A na-anya ya site na moto DC. Site inverter ma ọ bụ DC ọsọ regulator ọ nwere ike nweta anụ stepless ọsọ ukpụhọde, elu kpọmkwem na ike ịzọpụta. Ọgụgụ isi sọrọ ngosi digital okpomọkụ njikwa a na-eji mma akara nkenke na okpomọkụ mmajijiji.
Conical ejima-ịghasa extruder usoro conical ejima ịghasa extruder na-tumadi ekewetde gbọmgbọm ịghasa, gia nnyefe usoro, quantitative nri, agụụ iyuzucha, kpo oku, obi jụrụ na eletriki akara mmiri Etc. The conical ejima ịghasa extruder adabara maka amị PVC ngwaahịa si mbuaha ntụ ntụ. .
A na-eji extruder eme ihe n'ọtụtụ ebe:
Adabara ịkwanyere, UPVC ntụ ntụ
Usoro ọkpọkọ, efere, mpempe akwụkwọ, profaịlụ yana granulu
Rewghasa n'obosara (mm)
Rewghasa na-agba ọsọ ọsọ (r / min)
Nke gara aga: Single ịghasa extruder
Osote: Pipekwanyere anwụrụ mmepụta akara